Dzimwe nzira dzekudyara muna 2017 | Ehupfumi Zvemari
Dzimwe nzira dzekudyara muna 2017
Semugore rega, zvakare, pachavepo mikana mitsva yebhizimisi mumisika yemari. Idzi ndidzo dzimwe nzira dzekudyara dzinozove dzako kubva ikozvino. Mune zvimwe zviitiko vanozove echinyakare mabikirwo, asi mune zvimwe zviitiko ivo vanozotaridzika kune kwavo kutsva uye nenzira yehunyanzvi hwavo. Muzviitiko zvese, zvichagadziriswa seimwe yezviridzwa zvitsva zvauchazofanira kuita kuti kuchengetedza kwako kubatsire. Pamusoro pe mazano ekudyara zvimwe zvekare kana izvo zvawaive uchishandiswa kushanda.
Mumamiriro ezvinhu mazhinji, zviitiko zvinounzwa kwauri zvinobva kumisika yemari. Asi mune zvimwe zviitiko, haufanire kukanganwa mikana iyo dzimwe sarudzo dzauchakupa. Kune akawanda iwe aunogona kutora mukana, kunyangwe iwo mashoma chete angave akanakisa mazano ekudyara mari yako mukati megore rino. Ehezve, iwe unenge usiri kushomeka pane zvirevo zve zvine chekuita nenyika yemari. Kunyangwe paine zvinopfuura zvingasarudzike sarudzo mune dzimwe nguva.
Chimwe chezvinangwa kuburikidza neiri rakasarudzika zano nderekuti zvikamu zvekudzoka zvakakwirira kupfuura kuburikidza neyakawandisa tsika dzako. Nechishuwo kunyangwe izvo zvandinogona svika kaviri manhamba. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kurimisa iro mune chero mhando mamiriro, kunyangwe mune isingafadzi kune ako zvaunofarira. Sezvo kune rumwe rutivi vanogona kuitika mumisika yemari. Nekusahadzika kwakawanda kunomutswa muhupfumi hwenyika dzese. Kubva kumakona ese uye eakasiyana maitiro.
1 Dzimwe nzira: mbishi zvigadzirwa
2 Kuisa mari mune zvimwe zvakakosha simbi
3 Mari yemusika, imwe yesarudzo huru
4 Zvemagariro vakazvipira mari
5 Mipiro yezvikumbiro izvi
Dzimwe nzira: mbishi zvigadzirwa
Pasina kupokana, iyi nhepfenyuro yezvemari inogona kuve chimwe chezvishamiso zvakanaka kwemwedzi gumi nembiri inotevera. Nekuti zvirizvo, yakawanda yemitengo yezvakanyanya chikafu inogona kuve inodhura kubva zvino zvichienda mberi. Kunyangwe pachokwadi ivo vari kutoitora mune yekoteti yemitengo yavo. Nekutengesa kwekukosha kwakadai senge kofi, soy, gorosi, kana shuga pakati pezvakanyanya kukosha. Hazvishamisi kuti vane mukana wakakosha wekuongorora. Pamusoro pemamwe marudzi ezvirongwa zvekudyara.
Chero zvazvingaitika, iwe unofanirwa kuzvimisikidza nenzira yakakodzera. Ivo havangogara vachikupa iwe chiratidzo chekupinda kuti uzarure zvinzvimbo. Asi zvirokwazvo ivo vanozoonekwa paunenge usingatombozvitarisira. Chero zvazvingaitika, vanofanirwa kunge vari inokurumidza uye inoshanduka mashandiro kujairira kune yavo yekuisa uye yekubuda mazinga. Sechirongwa chekugadzirisa mashandiro auri kutsvaga mumisika yemari. Vanogona kukupa unopfuura mufaro mumwe kubva zvino zvichienda mberi. Kwete kunze kwekufungidzira mamwe matanho enjodzi aunofanirwa kutevedzera.
Izvo zvigadzirwa zvemari zvinonyanya kunetseka nekufamba uku mari yekuchinjana-inotengeswa. Nekuti vamwe vevane mari vanobatanidzwa nekuvapo kukuru. Mukupesana nekushanda pamusika wemasheya, ane muganho unonyanya kuzivikanwa. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kusarudza chero chero hupfumi hwemari hweaya maficha. Kunyangwe uine mukana wekuti iwe unogona kusiyanisa mari nezvimwe zvinhu zvemari. Ose akagadziriswa uye akasiyana mari. Ichave chimwe chezvakanaka icho modhi yekudyara iyi ichakuunzira. Chokwadi zvichave nenzira iyi.
Kuisa mari mune zvimwe zvakakosha simbi
Uyu musika uchava imwe yeimwe nzira dzekudyara kwako. Asi kwete kuburikidza negoridhe rechinyakare, asi kune zvimwe zviwanikwa zveaya maitiro. Kunyanya, kutora chinzvimbo mune sirivheri, palladium kana platinum. Iwo mamwe sarudzo dzisingazivikanwe kune vashoma uye vepakati varimi. Asi nemugove unoshanda kwazvo wemusika. Chero nzira, iwe unofanirwa kuvatora kuti vafunge kuchengetedza mari mumwedzi mishoma inotevera. Kunyangwe sekuwedzera kana kusiri kwepuraimari kudyara. Sefcrum yemafambiro ako makuru.
Dambudziko hombe rauchazove naro kubva zvino kuenda kwaunoda kuenda. Nekuti mukuita, ivo havawanike mumisika yese yemari. Pakati payo misika yemasheya uye chikamu chakanaka chemari inoshanduka chinobuda. Izvo zvigadzirwa zvemari zvinonyanya kutora maitiro aya mutual mari kana ETFs. Chero chipi zvacho chinokupa iwe mukana wekupinda mune dzimwe dzesimbi dzinokosha. Kunyangwe mune chero zviitiko zvacho, iwe unenge usina sarudzo kunze kwekupa yakafara tsika tsika yemari. Kana ruzivo rwakawanda mukushanda kwezvinhu izvi zvemari.
Izvi simbi zvinowanzoita, kune rimwe divi, senzira dzakachengeteka dzekutarisana neakanyanya mamiriro asina kunaka. Sechinhu chekuongorora kuitira kuti iwe ugone kuchinjisa mari yako. Iwe unogona zvakare kuenda kumisika yavo yemari. Asi nematambudziko akakura maererano nekudiwa kwezvaanonyanya kutaura. Ichokwadi kuti iwe unogona kuwana mari yakawanda neaya mashandiro mune imwe misika. Kunyangwe nekuda kwechikonzero chimwe chete, kurasikirwa nemari. Kukusiira ma euro akawanda mune yega yega mashandiro mune aya akanyanya mari emari.
Mari yemusika, imwe yesarudzo huru
Kana misika iyi ichizivikanwa nechimwe chinhu, zviri nebasa guru mumitengo yavo. Nekufambisa kwakangoerekana kwaitika muzvikamu zvese. Kuve wakanyanya kurairwa kune ese investor profiles. Kubva pane yakanyanya hasha kusvika kune yakadzika zvine mutsindo. Iwe uchagara uine nguva yekudyara yako mari. Zvirongwa zvacho zvakawanda uye zvakasiyana muhunhu. Dhora, paundi sterling, Swiss franc kana yen yeJapan ndidzo dzimwe dzenzira dzaunofanirwa kukwidziridza kudyara kubva ikozvino. Zvichienderana neshanduko yeimwe neimwe yemari dzekunze.
Mune ino kesi, iwe unenge usina imwe sarudzo kunze kwekuenda kumisika uko idzi mari dzakanyorwa. Pasina zvimwe zvigadzirwa zvemari zvinoshanda sevamiririri. Sezvo kune rimwe divi zvinoitika nemamwe mafaera emari. Mukutsinhana ivo vanokupa iwe kukurumidza kukuru kutora zvinzvimbo. Uye semhedzisiro yavo, iwo mukana wekuvandudza yako yekutarisa account account ichawedzera. Kunyangwe iwe uchange uinewo njodzi huru yekurasa nzvimbo munzvimbo yako yekudyara. Ichi chinhu chaunofanira kufunga nezvacho kana iwe uchida kusarudza imwe yeiyi dzimwe nzira dzekudyara, senge mune ino mari.
Kuchinja-chinja ichave imwe yezvipo izvo izvo zvihomwe zvemari zvauchakupa. Kubva pazvinzvimbo zvine hukasha, kana kuti zvirinani kupfuura zveichi chikumbiro chemari. Hazvishamise kuti misiyano iri pakati pemitengo yavo yepamusoro nepashoma yakakwira kupfuura zvakajairwa. Nemafambiro anomhanya kwazvo ayo achazoda kushingairira mumafambiro aunotora kubva ikozvino. Hazvishamisi kuti vanogona kuenda newe kuzviitiko zvisingadiwe nekuda kwako.
Zvemagariro vakazvipira mari
Icho chimwe cheimwe sarudzo dzauinacho muruoko rwako kuti uwane mari yako inobatsira. Imwe yemabhenefiti ekusarudza iyi yekudyara modhi ndeyekuti ichakupa iwe mukana weku pindirana nemafungiro ako kana kunzwisisa hupenyu. Nemupiro waunogona kana kutora mukana neimwe nzira yekudyara mari inowanikwa. Zvichida kuburikidza nemari yekudyara yeaya maitiro. Mamaneja ari kugadzira zvigadzirwa zvinowedzera uye zvinozadzisa mabasa aya. Kubva pamakona ese uye nzira dzekudyara.
Imwe yemaitiro akajairwa anozvipira kune zvakatipoteredza uye nemhando dzese dzemazano ezvisikwa. Nekudiwa kukuru kubva kune vadiki nepakati varimi. Kusvika padanho rekuverengerwa mu nguva inoshandiswa uye mune dzimwe nguva mukuchengetedza kana maakaundi ane mari yepamusoro. Icho chimwe chezvinhu zvikuru zvitsva zvakaitika mumakore achangopfuura. Chinhu chasara ndechekuti iwe unobvuma chero izvi zvirevo zvinonzi zvakasvibira nekuda kwehunhu hwadzo.
Mipiro yezvikumbiro izvi
Pasina mubvunzo, iwe uchave uine sarudzo dzakawanda mumhando iyi yekudyara, uve neakasarudzika. Kubva munzira dzakasiyana zvinoenderana neprofile iwe yauri kupa seavhareji investor. Pakati pazvo pane zvinotevera izvo zvatinokufumura pazasi.
Iwe unofanirwa kusarudza iyo dzimwe nzira dzakanakisa mukudyara chero bedzi vachienderana nemaitiro ako ekudyara. Uye izvo kwete mune ese kesi, kana mamiriro, iwe unozogara wakafanana.
Mukana webhizinesi unogona kusimuka chero nguva mumisika yemari. Iwe unofanirwa kuve wakagadzirira kuziva kuti ndeupi mumwe musika unofanira kushanda. Nekuti inogona kungove isingatarisirwe iwe,
Chiratidzo chakajeka chaunogona kusarudza pamisika iyi ndeye yakakwira vhoriyamu yekutora kuratidza zvimwe zvezvinhu zvemari izvi. Iyo yepamusoro nhanho kupfuura yakajairwa ichave iri kiyi yekuti iwe uzarure zvinzvimbo mune imwe yemisika yayo yemari.
Imwe yemabasa anozivikanwa kwazvo mumamwe misika yemari ndeye inomiririrwa ne wokutengesera. Kufambisa kwenguva pfupi uye kuti iwe unogona kutozviisa muchikamu chimwe chete mumusika wemasheya. Nekudaro, iwe unofanirwa kuunganidza zvakawandisa ruzivo mukirasi ino yekufamba yakashomeka munguva.
Isu takupa iwe isinganzwisisike chikumbiro chekudyara mumusika wemasheya. Asi iwe unofanirwa kugara uchifunga kuti panogona kunge paine akawanda akawanda mune equities. Vhiki rega rega vanomuka mitsva yekutenga mikana vhiki rimwe nerimwe.
Zvichakurudzirwa zvakanyanya kuti iwe utarise zvimwe zvinangwa uye zvinokwanisika kuti ugone kuzadzisa zvinangwa zvako nedosi yakakura yechokwadi. Kwete zvisina maturo, chichava chimwe chikamu muchirongwa chaunogadzira mukudyara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Dzimwe nzira dzekudyara muna 2017
5 mawebhusaiti maunogona kuunganidza ruzivo nezve yemusika wekutengesa